अब अ’सभ्य तरिकाले खो’क्दा र हा’छ्यौँ गर्दा पनि यस्तो स’जाय भो’ग्नुपर्ने ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/अब अ’सभ्य तरिकाले खो’क्दा र हा’छ्यौँ गर्दा पनि यस्तो स’जाय भो’ग्नुपर्ने !
अब अ’सभ्य तरिकाले खो’क्दा र हा’छ्यौँ गर्दा पनि यस्तो स’जाय भो’ग्नुपर्ने !
चीनमा अब अ’सभ्य तरिकाले खो’क्दा र हा’छ्यौँ गर्दा पनि स’जाय हुने भएको छ। को’रोना भा’इरसको म’हामारीबाट तिङरिएको चीनले खो’क्दा र हा’छ्यौँ गर्दा पनि स’जाय भो’ग्नु पर्ने का’नुन ल्याएको हो। यो का’नुन जुलाई १ बाट चीनको राजधानी बेइजिङमा लागु हुनेछ। सजायका रुपमा अलग अलग श्रेणीको ज’रिवाना लगाइने छ। नयाँ का’नुनमा मानिसलाई सरसफाइमा ध्यान राख्नका लागि भनिएको छ।
यदी कोही व्यक्ति कुनै सं’क्रमणबाट पी’डित भए उसले इमानदारी पूर्वक जानकारी अस्पतालमा पुर्याउनु पर्नेछ। जरुरी जाँच र क्यारेन्टाइन अवधि पूरा गर्न र सबै जाँचलाई ग’म्भिरता पूर्वक लिन पनि अनुरोध गरिएको छ। सार्वजनिक स्थानमा सबैले एक मिटरको दूरीको पालना गर्नु पर्ने पनि का’नुनमा उल्लेख गरिएको छ।घरमै पनि खाना खाने समयमा अलग अलग प्लेटको प्रयोग गर्न तथा जुठो चम्चा तथा भाँडाको प्रयोग नगर्न पनि बताइएको छ।
यस आदेश अनुसार मुख र नाक नछोपेर खोक्नु वा हाछ्यु गर्नुलाई असभ्य भनिने छ। साथमा आफ्नै परिवारसँग पनि जु’टो खाना शेयर गर्नुलाई पनि असभ्य बताइएको छ। बि’रामी मानिसलाई सार्वजनिक स्थलमा नजान पनि अनुरोध गरिएको छ।
श्रीमानले विदेशबाट आएकी सुनसरीकी राधिकालाई अस्विकार गरेपछि…